रहस्यमयी जीवनको खोज र प्राप्ति | मझेरी डट कम
ks — Sat, 11/10/2012 - 13:02
आउँदा तीन दिनमा जीवनको खोजका सम्बन्धमा केही कुरा तपाईंहरूलाई भन्नेछु ।
भोलि बिहान मैले जीवनको खोजका सम्बन्धमा केही भन्नु अघि प्रारम्भिक रुपमा के भन्नु आवश्यक छ भने हामी जसलाई जीवन भन्दछौं, त्यसलाई जीवन भनी बुझ्ने कुनै कारण छैन । र, हामी जसलाई जीवन भनिरहेका छौं त्यो जीवन होइन भन्ने स्पष्ट नहुञ्जेल, यथार्थ जीवनको खोज प्रारम्भ हुन सक्दैन ।
हामी जे बुझ्छौं, यदि त्यो गलत छ भने हाम्रो समस्त जीवनको परिणति पनि गलत नै हुन्छ । हाम्रो बुझाइमा हाम्रो खोज निर्भर हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिला निवेदन गर्न चाहेको कुरा के हो भने असाध्यै थोरै व्यक्तिहरूलाई मात्र जीवन उपलब्ध हुन्छ ।
जन्म सबै व्यक्तिले पाउँछन् र अधिकांश व्यक्तिहरू जन्मलाई नै जीवन सम्झिने भूल गर्छन् । जेलाई हामी जीवन मान्दछौं, त्यो केवल एउटा जीवन पाउने अवसर हो– पाउने वा गुमाउने । किनकि त्यसबाट जीवन पाउन पनि सकिन्छ र जीवन गुमाउन पनि सकिन्छ ।
हामीले जेलाई जीवन भनी जानेका छौं, त्यो केवल एउटा अवसर हो, त्यो एउटा सम्भावना हो । त्यो एउटा बीउ हो, त्यसमा केही विकसित हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ । बीउ व्यर्थै रहने, त्यसमा कुनै टुसा नपलाउने, कुनै फूल नफुल्ने, कुनै फल नफल्ने पनि हुन सक्छ । दुवै कुराको सम्भावना छ ।
र, आजसम्म जस्तो भएको छ, अधिकांश व्यक्तिहरूको बीउ व्यर्थै रहन जान्छ । असाध्यै कम व्यक्तिको जीवनमा टुसा पलाउँछ, फूल फुल्छ र सुगन्ध आउँछ । यस्ता थोरै व्यक्तिहरूलाई हामी पुज्दछौं, उनीहरूलाई सम्झन्छौं, तर एउटा के कुरा सम्झदैनौं भने ठ्याक्कै त्यस्तै बीउ हामीले पनि पाएका छौं र ठ्याक्कै त्यस्तै सुगन्धको प्राप्ति हामी पनि गर्न सक्छौं ।
महावीर, कृष्ण वा क्राइष्टलाई देखेर पनि जसको मनमा मभित्र पनि ठ्याक्कै त्यस्तै बीउ छ र म पनि ठ्याक्कै उनीहरूकै जीवन जस्तै जीवनलाई उपलब्ध हुन सक्छु भन्ने अपमानको बोध जन्मदैन, उसको सबै पूजा व्यर्थ हुन्छ, सबै ढोंग हुन्छ र पाखण्ड हुन्छ– एउटा कुरा ।
त्यो पीडाबाट जोगिन नै हामीले कृष्णलाई, बुद्धलाई, महावीरलाई भगवान्््््् बनाएर राखेका छौं । यसै पीडाबाट जोगिन । किनकि यदि उनीहरू पनि मनुष्य हुन् भने हामीमा आफू मनुष्य हुनुको ग्लानि प्रारम्भ हुनेछ ।
यदि उनीहरू पनि हामी जस्तै मनुष्य हुन् भने हामी जोगिने कुनै ठाउँ, कुनै सम्भावना रहने छैन । त्यसैले जोगिनका लागि अपमानले, पीडाले, दुःखले उनीहरूलाई भगवान््््, ईश्वरका पुत्र, तीर्थंकर र खै के–के हो अबुझ कुराहरू हामीले उनीहरूमाथि लादेका छौं ।
सबै नै हामीजस्तै मनुष्य हुन् । सबै मनुष्य थिए । तर केही मनुष्य–बीउ ठीक तरिकाले विकसित हुन्छन् र तिनभित्र परमात्माको प्रकाश प्रकट हुन थाल्छ । धेरै बीउ विकसित हुन पाउँदैनन् ।
धर्मको कुनै सम्बन्ध छ भने त्यो यसै कुरासँग छ कि सबै बीउहरू जे हुनुपर्ने हो त्यो हुन पाऊन् । जे उनीहरूभित्र छ त्यो प्रकट होस् । र, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो आधारभूत, जरुरी कुरो, जुन म आज तपाईंहरूलाई भन्दै छु, जवसम्म, हामी जुन दिशा हिँडिरहेका छौं र जे गर्दै छौं त्यो एकदमै गलत छ भन्ने सम्झना नआउञ्जेलसम्म, कुनै क्रान्ति, कुनै परिवर्तन र कुनै मोड सम्भव हुनेछैन ।
यो करिव– करिव जसलाई हामीले जीवन जानेका छौं त्यो दिन–दिनै, विस्तारै–विस्तारै मर्दै जानुभन्दा बढी केही पनि होइन । र, लामो मृत्युलाई जीवन भन्न सकिँदैन । सत्तरी वर्षमा एउटा मान्छे मर्छ, यो सत्तरी वर्षसम्म मर्ने क्रिया चल्छ । सय वर्षमा कोही मर्दो होला, कोही पचास वर्षमा मर्दो होला । यो मर्ने लामो क्रियालाई नै हामी जीवन सम्झेर चुप लागेर बस्छौं ।
हिजो तपाईं जतिको हुनुहुन्थ्यो, आज त्यसभन्दा एक दिन कमको हुनुभयो । भोलि अझ एक दिन कमको हुनुहुनेछ । तपाईं जेलाई उमेर बढेको मान्नुहुन्छ, त्यो उमेर घटेको हो । र, जुन जन्म–दिनहरूलाई तपाईं जन्म दिवस भनेर मनाउनुहुन्छ, ती केवल मृत्यु नजिक पुग्ने कोशेढुङ्गा हुन् । सबैतिर दौडेर अन्त्यमा मृत्यु नजिक पुगेको थाहा पाइन्छ । जतासुकै दौडियोस्, जेसुकै गरियोस्, र हजारौं उपाय गरिन्छ, हजारौं व्यवस्था गरिन्छ, हाम्रा यी सबै दौड–धुप मृत्युबाट जोगिने उपायभन्दा वढ्ता अरु केही होइनन् । कोही सम्पत्ति थुपार्छन्, कोही प्रतिष्ठा थुपार्छन्, पद थुपार्छन्, शक्ति बढाउँछन् ... सबै चेष्टा एउटै कुराबाट जोगिनलाई हो कि भोलि मृत्यु आउनेछ, त्यसका विरुद्ध म कुनै सुरक्षा, कुनै सिक्योरिटीको व्यवस्था गरौं । तर सबै व्यवस्था भताभुङ्ग हुन्छन्, र मृत्यु आएरै छोड्छ ।
मलाई एउटा सानो कथाको स्मरण हुन्छ । दश्मिकमा एकजना बादशाहले एउटा सपना देख्यो । सपना के देख्यो भने ऊ एउटा रुखतल घोडा नजिकै उभिएको छ र कुनै कालो छायाँ आएर उसको काँधमाथि हात राख्यो । फर्केर हेर्दा ऊ भयभीत भयो । त्यो कालो छायाँले भन्यो, म मृत्यु हुँ, भोलि तयार भएर बस्नू र ठीक ठाउँमा पुग्नू, म तँलाई लिन आउँदै छु । उसको निद्रा भङ्ग भयो, सपना समाप्त भयो, ऊ डरायो । बिहानै उसले आफ्ना राज्यका ठूल्ठूला ज्योतिषीहरूलाई बोलायो । सपना बुझ्ने ठूल्ठूला विद्ववान््हरूलाई बोलायो र सोध्यो–यो सपनाको अर्थ के हो ? राती मैले कालो छायाँ देखेंँ जसले मेरो काँधमाथि हात राखेर म तँलाई लिन आउँछु, म मृत्यु हुँ, तयार भएर बस्नू र ठीक ठाउँमा भेटिनू भन्यो ।
धेरै समय पनि थिएन, केवल भोलिसम्मको कुरो थियो र भोलि साँझ, घाम अस्ताउँदा–नअस्ताउँदै मृत्यु आउनेछ । ज्योतिषीहरूले भने, अब यतिखेर धेरै विचार गर्ने समय पनि छैन । तपाईंसँग छिटोभन्दा छिटो दौडने कुनै घोडा छ भने त्यसलाई लिएर भाग्ने प्रयास गर्नुस् । जति टाढा भाग्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो ।
त्यसको अतिरिक्त अर्को कुनै उपाय सम्भव पनि थिएन । मनुष्यको बुद्धि, अरु के नै गर्न सक्थ्यो र ? यही एउटा उपाय हुन सक्थ्यो, त्यो महल, त्यो राजधानीबाट टाढाभन्दा टाढा भाग्नु । जोगिने अरु के नै उपाय हुन सक्थ्यो र ?
तपाईंसँग पनि कसैले सोधेको भए के गर्नुहुन्थ्यो ? मसँग पनि सोध्दा म के भन्थँे र ? ती ज्योतिषीहरूले ठीकै भने । मनुष्यको बुद्धि धेरै टाढासम्म पुग्दैन पनि, खोज्न पनि सक्दैन । सीधा कुरो, हामी वेस्कन दौडौं, बचौं हामी मृत्युसँग ।
वेगवान््् घोडाको त्यो राजासँग कुनै कमी थिएन । तीव्रभन्दा तीव्र घोडाहरू थिए । सबैभन्दा वेगवान््् घोडालाई ल्याइयो । ऊ चढ्यो र भाग्न थाल्यो । घोडा असाध्यै तीव्र थियो, राजा विस्तारै–विस्तारै निश्चिन्त हुन थाल्यो, घोडाको तीव्र चाल देखेर । जोगिने भएँ, भागियो, टाढा हुने भएँ भन्ने आत्मविश्वास आउनु स्वभाविक थियो ।
विस्तारै–विस्तारै राजधानी टाढा हुन थाल्यो, राज्य टाढा हुन थाल्यो, नगर, गाउँ टाढा हुन थाले । घोडा दौडिरहेको थियो । त्यो दिन न त राजा रोकियो, न उसले खाना खायो, न पानी पियो । को रोकिन्थ्यो र, को खाना खान्थ्यो र, को पानी पिउँथ्यो र, जसको पछि मृत्यु लागेको छ । न त उसले घोडा रोक्यो, न त घोडाका लागि पानीको प्रबन्ध गर्यो । त्यो दिन त उसले टाढाभन्दा टाढा पुग्नु आवश्यक थियो ।
दिउँसो भयो । राजा धेरै टाढा पुगिसकेको थियो, ऊ धेरै प्रसन्न थियो । दिउँसोसम्म त ऊ उदास पनि थियो । दिउँसोपछि त ऊ गीत पनि गुनगुनाउन थाल्यो । धेरै टाढा आइसकेको छु भन्ने विचार आयो । साँझ पर्दा नपर्दै ऊ सयौं मिल टाढा पुगिसकेको थियो । अब घाम अस्ताउँदै थियो, उसले एउटा आँपको बगँैंचामा आफ्नो घोडा बाँध्यो र एउटा झाडीेमुनि उभियो । ऊ निश्चिन्त थियो । धेरै टाढा भाग्न सकेकोमा उसले परमात्मालाई धन्यवाद दिनै आँटेको थियो कि त्यही उसले राती देखेको पञ्जा, उसको काँधमाथि राखिएको उसले देख्यो । ऊ डरायो । उसले फर्केर हेर्यो, त्यही कालो छायाँ उभिएको थियो ।
त्यो कालो छायाँले भन्यो, म असाध्यै चिन्तित थिएँ, यति टाढा तँ आउन भ्याउँछस् कि भ्याउँदैनस् । किनकि यही त्यो ठाउँ हो, जहाँ तेरो मृत्यु निश्चित गरिएको छ । म त चिन्तित थिएँ, यति लामो दूरी पार गर्न तँ सक्छस् कि सक्दैनस्, यो कसरी सम्भव होला र ? तर घोडा साँच्चै नै वेगवान््् रहेछ, तँ ठीक किसिमले दौडिस् र ठीक समयमा उपस्थित भइस् ।
हामी जसरी दौडौं ... एकदिन यो हुन्छ नै । तपाईंले सपना देखे पनि वा नदेखे पनि त्यसले केही फरक पार्दैन । यो हुन्छ । एकदिन मृत्यु ठीक ठाउँमा भेटिन्छ, जहाँ उसले भेटिनुपर्ने हो ।
त, के हुन सक्छ भने हाम्रो भाग्ने दिशा भिन्नै होस्, हाम्रा घोडाका चाल भिन्नै होऊन् । त्यो हुन सक्छ । तर, अन्तिम कुरोमा धेरै फरक हँुदैन । कुनै झाडीमुनि, कुनै न कुनै दिन काँधमाथि हात राखिनेछ । त्यतिखेर तपाईं पाउनुहुन्छ, जेसँग तपाईं तर्किरहनुभएको थियो, त्योसँग जम्काभेट भएरै छोड्यो । र, त्यो दिन तपाईं डराउनुहुन्छ । जसबाट जोगिन तपाईं दौडिरहनु भएको थियो, वस्तुतः तपाईं त्यतातिर नै दौडिरहनु भएको थियो । मृत्युसँग जोगिने कुनै उपाय छैन ।
हामी जतासुकै भागौं, हामी मृत्युतिर नै भाग्छौं ।
भाग्नुले केवल मृत्युसम्म पुर्याउँछ ।
जो भाग्छ, ऊ मृत्युसम्म पुग्छ ।
त, के हुन सक्ला भने दरिद्र विस्तारै–विस्तारै दौडला । उससँग घोडा छैन, घोडाविना नै दौडला । समृद्ध ठूलो घोडामा दौडला, र राजाहरू असाध्यै तीव्र चाल भएका घोडामा दौडलान् । तर, अन्त्यमा घोडाविनाका मान्छेहरू पनि त्यहीँ पुग्छन् र घोडावालहरूपनि त्यहीँ नै पुग्छन् ।
उपाय के छ ? बाटो के हो ? के गर्ने ?
त्यसैले पहिलो कुरो जे म तपाईंलाई भन्न चाहन्छु– तपाईं जे गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले तपाईंलाई मृत्युसम्म पुर्याउनेछ । र, यो कुनै अनौठो कुरो होइन । आजभन्दा पहिला पनि जे गरिएको छ, त्यसले मृत्युसम्म पुर्याएको छ । थोरै व्यक्तिहरू मृत्युबाट जोगिएका छन्, र, उनीहरूले जे गरे त्यो तपाईं गरिरहनु भएको छैन । मनुष्य जातिको इतिहासमा थोरै व्यक्तिहरू मात्र मृत्युबाट जोगिएका छन् । र, उनीहरूले जे गरे त्यो तपाईं गरिरहनु भएको छैन । त्यसैले तपाईं जे–जस्तो तयारी गरिरहनु भएको छ, त्यो मृत्युको तयारी हो । त्यो प्रिय लागे पनि, अप्रिय लागे पनि तथ्य र सत्य के हो भने हामी सबैको तयारी मृत्युको तयारी हो ।
हुन सक्छ, तपाईंभित्र पनि जीवनलाई बुझ्ने र पाउने आकाङ्क्षा होला । वस्तुतः त्यस्तो कुनै मनुष्य छैन, जसभित्र जीवन पाउने आकाङ्क्षा नरहेको होस् । तर पनि कुनै पागलपन छ, कुनै ठूलो पागलपन छ, कुनै गहिरो पागलपन छ, जसबाट पूरै मनुष्य जाति ग्रसित छ । नयाँ बच्चाहरू आउँछन् र त्यही पागलपनबाट दीक्षित हुन्छन् । सम्भवतः यस्तो हुनु स्वभाविक पनि हो । यदि नयाँ वच्चा दीक्षित नहुने हो भने हामी पागलजस्ता लाग्नेछौं ।
महावीर जुन दिन घर छोड्छन्, मान्छेहरू उनलाई पागल भन्छन् । बुद्ध जुन दिन घरबाट भाग्छन्, त्यो दिन उनलाई पनि पागल सम्झिइन्छ, र, क्राइष्टलाई पनि पागल भनिन्छ । सम्पूर्ण मनुष्य जाति पागल छ, त्यसैले जहिल्यै पनि कुनै सद्धे मान्छे जन्मिँदा पागल बुझिन्छ ।
एउटा छोटो कथा भनौं, त्यसले मेरो कुरो बुझिन्छ होला । एउटा, कस्तो भयो भने, एकदिन बिहान–सवेरै एउटी बूढी आइमाई आएर गाउँको कुवामा केही हाली र भनी, अब जसले यो कुवाको पानी खान्छ, त्यो पागल हुन्छ । गाउँमा दुईवटा मात्र कुवा थिए । एउटा गाउँको कुवा थियो र अर्काे राजाको महलको कुवा थियो । साँझसम्ममा, वाध्यता थियो, सारा गाउँ पागल भयो, पानी पिउनै पर्यो त्यो कुवाको । केवल राजा, रानी र मन्त्री तीनजना, जसले त्यो कुवाको पानी पिएका थिएनन्, जोगिए, उनीहरू पागल भएनन् । सारा गाउँ साँझ पर्दा नपर्दै पागल भइसकेको थियो ।
सारा गाउँमा एउटा उडन्ते खवर के फैलियो भने राजाको दिमाग खराव भइसकेको छ । यो स्वभाविक पनि थियो किनकि सारा गाउँ पागल हँुदा एउटा व्यक्ति जो पागल हुँदैन, पागलजस्तैे लाग्छ । त्यसैले गणित प्रष्ट छ, ती सबै व्यक्तिहरू असाध्यै चिन्तित भए र झन्झटमा परे । तीमध्ये जो विचारशील थिए र पागलहरूमध्ये पनि धेरै विचारशील हुन्छन्, त्यसैले पागल र विचारशीलहरू बीचमा असाध्यै थोरै दूरी हुन्छ । विचारशीलहरू प्रायः पागल हुन्छन् र पागलहरू प्रायः विचार गर्न थाल्छन् ।
राजा, उनका मन्त्री, उनकी रानी माथि महलमा उभिएर विचार गर्न थाले, अब के गर्ने ? उनका सिपाहीहरू पनि पागल भएका थिए, नोकरहरू पनि उनका पागल भइसकेका थिए, सबै पागल थिए, अब के हुन्छ ? राजाले मन्त्रीलाई सोधे, चाँडै केही सोच, के गर्ने ? उनले भने, केवल त्यो कुवाको पानी पिउनु सिवाय अर्को कुनै उपाय छैन । ती तीनैजनाले सबैलाई भने, तिमीहरू एकछिन पर्ख, हामी आफ्नो पागलपनको उपचार गर्नेछौं । उनीहरू गए र त्यो कुवाको पानी पिए । त्यो रात गाउँमा ठूलो खुशी मनाइयो । मान्छेहरू नाँचे र उनीहरूले गीत गाए, राजाको दिमाग ठीक भएको छ ।
त्यसैले यो संसारमा स्वस्थ हुनु वडो खतरनाक कुरो हो । र, जुन मान्छे स्वस्थ हुन्छ, उसले स्वस्थ हुनुको ठूलो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्छ । कसैले गोली खानुपर्छ, कसैले विष पिउनुपर्छ वा कसैले सूलीमा झुण्डिनुपर्छ । पागलहरूको संसार हो, त्यसैले स्वस्थ मान्छेहरू यहाँ सह्य हुँदैनन् । यो पागलहरूको संसारमा जो जति ठूलो पागल हुन्छ त्यति नै प्रिय हुन्छ । किनकि ऊ आफ्नैजस्तो लाग्छ, ठीक त्यही बाटोमा हिंँडिरहे जस्तै लाग्छ, जुन बाटोमा हामीहरू हिँंडिरहेका हुन्छौं ।
त, म तपाईंहरुंलाई के भन्न चाहन्छु भने मनुष्य जातिलाई समातेर बसेको जुन गहिरो पागलपनको स्थिति छ, त्यसबाट छुटकारा पाउने बाटो कुन हो ? र, यदि कुनै मार्ग नखोज्ने हो भने मृत्यु त्यसको फल हुनेछ । र, जेसुकै गर्नुस्, अन्ततः मृत्युले पक्रनेछ, भोलि पक्रन सक्छ, आज पक्रन सक्छ, अहिल्यै पक्रन सक्छ ।
फेरि, जीवन एउटा अवसर हो । जति क्षण हामी गुमाउँछौं, त्यसलाई पुनः पाउने कुनै उपाय छैन । र, जीवन एउटा अवसर हो, त्यसलाई हामी कुनै पनि प्रकारले, कुनै पनि रुपमा परिवर्तन गर्न सक्छौं । हामी त्यसमा जे गर्छाैं, त्यसबाट जीवन परिवर्तित हुन पुग्छ । केही व्यक्तिहरू त्यसलाई सम्पत्तिमा परिवर्तन गर्छन् ! जीवनभरि, जीवनका समस्त अवसरलाई, सम्पूर्ण शक्तिलाई सम्पत्तिमा परिवर्तन गर्छन् । तर, मृत्यु जहिले पनि अगाडि उभिएको हुन्छ, सम्पत्ति व्यर्थ हुन पुग्छ ।
केही व्यक्तिहरू जीवनभरि श्रम गरेर अवसरलाई यशमा, कीर्तिमा परिवर्तन गर्छन् । यश हुन्छ, कीर्ति हुन्छ, अहङ्कारको तृप्ति हुन्छ, तर जतिखेर मृत्यु अघिल्तिर उभिन्छ, अहङ्कार, यश र कीर्ति सबै व्यर्थ हुन पुग्छन् ।
तपाईंको जीवन व्यर्थ गएन भनेर परीक्षण केले गर्नुहुन्छ ?
परीक्षण एउटै छ, मृत्यु अघिल्तिर आउँदा तपाईंले जीवनमा जे कमाउनुभएको छ, त्यो व्यर्थ हुनु भएन । तपाईंले जीवनका अवसरलाई जे कुरामा परिवर्तन गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण जीवनलाई जुन दाउमा लगाउनुभएको छ, मृत्यु अघिल्तिर उभिँदा त्यो व्यर्थ हुनु भएन, त्यसको सार्थकता रहिरहनु पर्यो ।
मृत्युसमक्ष जे सार्थक हुन्छ, त्यही नै वस्तुतः सार्थक हुन्छ, बाँकी सबै व्यर्थ हुन्छन् । त्यसैले पुनः दोहोर्याउँदै छु– मृत्युसमक्ष जे सार्थक हुन्छ, केवल त्यही सार्थक हुन्छ, बाँकी सबै व्यर्थ हुन्छन् ।
यदि हुँदैन भने, आजै सचेत हुनु उचित हुन्छ । र, त्यस दिशातर्फ सङ्लग्न हुनु पनि उचित हुन्छ, म कुनै त्यस्तो सम्पदा निर्माण गर्न सकूँ, त्यस्तो कुनै शक्ति पनि निर्माण गर्न सकूँ र प्राणभित्र कुनै त्यस्तो ऊर्जा जन्माउन सकूँ कि मृत्यु समक्ष हुँदा मभित्र केही होओस्, जुन मृत्युबाट जोगियोस्, मृत्युले त्यसलाई नष्ट गर्न नसकोस् ।
यो हुन सक्छ । र, यदि यो हुन नसक्ने हो भने सबै धर्महरू वाहियात हुन्, व्यर्थ हुन् । यस्तो भएको छ, आज पनि हुन सक्छ र हरेकको जीवनमा हुन सक्छ । तर यो आकाशबाट झरेर हुँदैन, न त यो दानमा पाइन्छ । र, न यसलाई चोरी नै गर्न सकिन्छ, न त कुनै गुरुको पाउमा बसेर सित्तैमा पाउन सकिन्छ ।
यो अरु कोहीबाट पाउन सकिँदैन । यसलाई त जन्माउन सकिन्छ, यसको त सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसलाई स्वयम् आफ्नो श्रम, र आफ्नो जीवन, र आफ्नो सङ्कल्प अनि आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिको प्रयोगबाट निर्माण गर्न सकिन्छ । तर यो निर्माणको दिशातर्फ त्यतिञ्जेलसम्म पाइला उठ्दैन, हामी जे गर्दै छौं, त्यसलाई हामीले ठीक बुझुञ्जेलसम्म पाइला उठ्दैन । हामी जसरी बाँचिरहेका छौं, त्यसलाई हामीले ठीक बुझुञ्जेलसम्म यस दिशामा पाइला उठ्न सक्दैन ।
जीवन हाम्रो कतै भ्रान्तिमा छ, कतै गलत छ । हाम्रो दिशाले हामीलाई कुनै त्यस्तो बाटोमा पुर्याउँदै छ, जुन कतै पुग्दैन, त्यस्तो बोधको आवश्यक्ता छ । र, त्यो बोधको जन्मका लागि आफ्नो जीवनलाई मृत्यु समक्ष राखेर तौलनुलाई म परीक्षण मान्दछु । एकदिन तौलनुपर्छ तर त्यो समयमा गर्नलाई केही पनि वाँकी रहेको हुँदैन । त्यसैले जो पहिलादेखि नै तौलन थाल्छ उसले पक्कै केही गर्न सक्छ । उसको जीवनमा केही हुन सक्छ, उसको जीवनमा कुनै क्रान्ति घनिभूत हुन पुग्छ । आजदेखि नै तौलनु जरुरी छ । प्रतिदिन तौलनु जरुरी छ ।
बर्नार्ड शाले एकदिन कतै जिस्किएर यस्तो भनेका थिए, प्रत्येक मान्छेले, संसारमा यस्ता अदालतहरू हुनु पर्छ कि प्रत्येक तीन वर्षमा ती अदालत समक्ष, प्रत्येक मान्छेले उपस्थित हुनु परोस् । र, उसले तीन वर्ष बाँच्नुको, उसले बाँचेको तीन बर्षको सार्थकता अदालत समक्ष सिद्ध गर्नुपरोस् । ठट्टा थियो । न त यस्ता अदालतहरू हुन सक्छन् र हुने नै भए पनि बडो अफ्ठ्यारो पर्नेछ । कसरी आफ्नो जीवनको सार्थकता सिद्ध गर्नु हुन्छ ? म जे बाँचेँ, त्यसको फल यस्तो भएको छ, त्यसबाट यस्तो सार्थकता निस्केको छ, त्यसबाट यस्तो अर्थ निष्पत्ति भएको छ भनेर कसरी भन्नुहुन्छ ?
अहँ, तर छोड्नुस्, कुनै अदालत नहोस् तर प्रत्येक व्यक्तिको मनमा आफ्नो विवेकको अदालत त हुनै पर्छ, जसका सामु उसले दैनिक उपस्थित हुनु परोस् । जो समक्ष उसले प्रत्येक क्षण नै उपस्थित हुनु परोस् र त्यहाँ उसले सोध्नु परोस्, म किन बाँचिरहेको छु ? र, त्यहाँ सोध्नु परोस् कि म जे बाँच्दै छु, त्यसबाट केही हुन्छ ? त्यसबाट केही पाइन्छ ? त्यसबाट म कतै पुग्छु ? त्यसबाट दौडाइ रोकिन्छ ? त्यसबाट दुःख मेटिन्छ ? त्यसबाट अन्धकार हराउँछ ? त्यसबाट मृत्यु हराउँछ कि हराउँदैन ? यो प्रश्न जसको मनमा असाध्यै घनिभूत भएर उब्जिन्छ, उसको जीवनमा धर्मको प्रारम्भ हुन्छ । शास्त्र पढेर धर्मको प्रारम्भ हुँदैन । तर, स्वयम्का सामु जीवनलाई निरन्तर तौलदा धर्मको प्रारम्भ हुन्छ । दिन–दिनै तौलनुको आवश्यक्ता छ, क्षण–प्रतिक्षण तौलनुको आवश्यक्ता छ ।
त्यसैले यो विचारका लागि, प्रारम्भिक विचारका लागि भन्दै छु । यसैका आधारमा यताका तीन दिन तपाईंहरूसँग त्यो बाटोका वारेमा कुरा गर्नेछु, जसमा हामी मृत्युको दिशाबाट छुट्टिएर अमृतको दिशातिर गति लिन सक्छौं । तपाईंहरूको मनमा पनि त्यस्तो अमर जीवन पाउन सके त बडो राम्रो भन्ने सोचाइ त होला । मनभित्र मृत्युबाट जोगिन पाए त बडो राम्रो भन्ने आकाङ्क्षाको जन्म त हुन्छ होला । मनलाई अमृत पाऊँ भन्ने त लाग्दो होला ।
तर अहँ, त्यो पाउने वास्तविक आकाङ्क्षा त्यतिञ्जेलसम्म जन्मिँदैन, जहिलेसम्म हाम्रो हालको जीवन आफ्नो सम्पूर्ण व्यर्थतामा स्पष्ट हुँदैन । हाम्रो अहिलेको जीवन बाँच्ने तरिका, हाम्रो पद्धति, हाम्रो सोचविचार, हाम्रो प्राणको गति सबै नै व्यर्थ भएर नदेखिए सम्म । म जे गर्दै छु, त्यो पूर्णरुपमा व्यर्थ रहेछ भन्ने नदेखिए सम्म । त्यो छटपटी, त्यो डर र म जे गर्दै छु, त्यो व्यर्थ छ भन्ने चिन्ता जीवनमा नआएसम्म सार्थक दिशातिरको कल्पना कसरी आउँछ, त्यस्तो विचार कसरी जन्मिन्छ ?
त्यसैले आज के मात्र भन्न चाहन्छु भने मृत्युलाई आफू अघिल्तिर राख्नुस् । हामी सबै नै त्यसलाई पछिल्तिर राख्छौं । त्यतातिर पिठ्युँ फर्काउँछौं । मृत्युतिर पिठ्युँ फर्काउने व्यक्ति ठूलो धोखामा हुन्छ ।
म एउटा यात्रामा थिएँ । वर्षाको समय थियो र एउटा पहाडी नदीको किनारमा केही समय मैले रोकिनु पर्यो । मेरो गाडी रोकियो । एउटा सानो खोल्सो उर्लेको थियो । म पछि अरु पनि दुई–तीन गाडीहरू आए, ती पनि रोकिए । ती गाडीमा हुनुभएकाहरू मेरा लागि अपरिचित हुुनुहुन्थ्यो, तर म रोकिएको देखेर नजिकै आउनुभयो । र, कुरा–कानी सुरु भयो । म उहाँहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ, अचानक नै यस सम्वन्धमा कुरो चल्यो । उहाँहरूले मलाई सबैभन्दा बढी विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेर सोध्नुभयो । मैले उहाँहरूलाई भने– एउटै मात्र विचार गर्नुपर्ने जस्तो कुरा छ, त्यो हो मृत्यु ।
उहाँसँग धेरै कुरा भए । उहाँले मलाई पछि भेट्ने कुरो गर्नुभयो । मैले जिस्किएर उहाँलाई जवाफ दिएँ – पछि भेट्ने कुराको कुनै पक्का भरोसा छैन । हुन सक्छ म नरहूँ, हुन सक्छ तपाईं नरहनुहोला, हुन सक्छ, हामी दुवै नै रहौंला तर भेट्ने कुनै संयोग नजुर्ला ।
मैले उहाँलाई एउटा छोटो कथा भनेँ र मेरो कल्पनामा कहिल्यै थिएन, के होला ? जाँदा–जाँदै ... खोल्साको भेल कम भइसकेको थियो, त्यतिखेर मैले उहाँलाई एउटा कथा भने–
चीनमा एकजना बादशाह आफ्नो मन्त्रीसँग रिसायो र फलानो दिनको बिहान उसलाई फाँसी झुण्ड्याउने निर्णय गर्यो । तर कसैलाई फाँसी झुण्ड्याउँदा राजा आफैं बिहान सबेरै गई कैदीलाई भेट्ने र उसको कुनै इच्छा भए पूरा गर्ने त्यो राज्यको परम्परा थियो । फेरि ऊ त मन्त्री थियो । हुनत राजाको प्रिय थियो तर कुनै भूल–चूक भएकोले राजा रिसाएको थियो । र, फाँसी झुण्ड्याउने सजाय दिएको थियो । आज फाँसी झुण्ड्याइने थियो, राजा बिहान सवेरै आयो । आफ्नो घोडाबाट ओर्लिएर तेरो कुनै इच्छा भए म पूरा गर्छु भन्यो ।
तर त्यतिभन्दा नै मन्त्रीका आँखामा आँसु आए । राजा छक्क पर्यो । मन्त्री असाध्यै बहादुर थियो, उसले जीवनमा रुन जानेकै थिएन । यो असम्भव थियो, आफ्नो मृत्युको चिन्तामा उसले रुन थाल्नु, यो असम्भव थियो । राजा छक्क पर्यो, तेरो आँखामा आँसु देखेर म छक्क पर्दै छु भन्यो । मन्त्रीले भन्यो, मेरो मृत्यु नजिक आएको देखेर म रोएको होइन, अरु नै कुनै कुराले गर्दा रुँदै छु । तपाईंको घोडा देखेर रुँदै छु ।
राजाले भन्यो, मेरो घोडा देखेर किन रुनु ? त्यो मन्त्रीले भन्यो, मैले वर्षौं मेहनत गरेर एउटा कला जानेको थिएँ, म घोडालाई उड्न सिकाउन सक्थेंँ, तर जुन जातको घोडा उड्न सिक्न सक्थ्यो, त्यो मेरो जीवनमा मैले पाउन सकिनँ र तपाईं जुन घोडा चढेर आउनुभएको छ, त्यो त्यही जातको घोडा हो । त्यसैले मेरा आँखामा आँसु आए, जीवन जुन कला सिक्न व्यतित गरियो, त्यो आज मसँगै समाप्त हँुदैे छ ।
राजाले सोच्यो, घोडाले उड्न सिक्ने हो भने त अद्भूत नै हुनेछ । त्यसैले उसले भन्यो, यसमा चिन्तित हुने कुरै छैन, नरोऊ । यस् घोडालाई उडन् सिक्न कति समय लाग्छ ? मन्त्रीले भन्यो, केवल एक वर्ष ।
राजाले भन्यो, घोडाले उड्न सिक्यो भने मृत्युदण्डबाट त तँ जोगिन्छस् नै, फेरि तँलाईं मन्त्री पनि बनाउँला र धेरै धन–सम्पत्ति, जे तँ चाहन्छस्, त्यो पनि दिऊँला । र, यसमा कुनै अफ्ठ्यारो पनि छैन, वर्ष दिन पछि घोडाले उड्न सिकेन भने तँलाईं फाँसी झुण्ड्याऊँला, वर्ष दिन पछि झुण्ड्याऊँला ।
मन्त्री घोडामा चढेर घर फर्कियो । घरमा मान्छेहरू फाँसी झुण्ड्याइयो भनेर रुँदै थिए । उसलाई घर फर्केको देखेर सबै छक्क परे । सबैले सोधे, तँ कसरी फर्किस् ? उसले सबै कथा भन्यो, तर पनि उसकी पत्नी रोई नै रही, उसका छोरा–छोरी रोई नै रहे । उसले तिमीहरू रुन बन्द गर भन्यो । उसकी पत्नीले भनी, तिमी घोडा उडाउने कला जान्दैनौ भन्ने मलाई थाहा छ, तिमीले किन त्यस्तो पागल कुरा गर्यौ ? आज मथ्र्याै, अब वर्ष दिन पछि मर्छौ । हाम्रा लागि त त्यो एक वर्ष तिम्रो मृत्युको प्रतीक्षाको समय हुनेछ । त्यस्तै गर्नुथियो भने, धोखा नै दिनुथियो भने, कमसेकम वीस वर्ष, पचास वर्ष, त्यस्तै कुनै समय माँग्नु पथ्र्यौ ।
तर मन्त्री हाँस्न थाल्यो, के जीवनको तरिका जान्दिनौ र ? वर्ष दिनको के भरोसा ? म मर्न सक्छु, घोडा मर्न सक्छ, बादशाह मर्न सक्छ । वर्ष दिन ठूलो कुरा हो । र, वीस वर्ष माँगेको भए राजालाई पत्यार लाग्दैनथ्यो । वीस वर्ष लामो समय हुन्थ्यो । एक वर्ष माँगेको छु, एक वर्ष धेरै लामो समय हो र जे पनि हुन सक्छ– म मर्न सक्छु, घोडा मर्न सक्छ, बादशाह मर्न सक्छ, कुरो टर्छ ।
यो कथा उनलाई भनेँ । र, घटना यसरी घट्यो जसको कसैले कल्पनासम्म गरेको थिएन । ती तीनैजना त्यसै वर्ष मरे– राजा पनि, मन्त्री पनि, घोडा पनि ।
यो उहाँलाई भनेँ । फेरि खोल्साको भेल पनि कम भएको थियो । उहाँ गाडी लिएर हिंँड्नुभयो । फर्केर आउँदा, तपाईंलाई अवश्य नै भेट्छु भन्नुभयो । फेरि पनि उहाँले त्यही कुरो भन्नुभयो । हाम्रा कुराकानी यस्तै हुन्छन्, जतिसुकै भनियोस्, हामी फेरिफेरि त्यही–त्यही भन्न र त्यही–त्यही गर्न थाल्छौं । मेरा लागि त दिनहुँ नै यस्तै स्थिति छ । त्यही सम्झाउँछु, त्यही सोधिन्छ, फेरि त्यसबाट उल्टो कुरो सोध्न कोही अर्कै आउँछ ।
उहाँले फेरि जाने वेलामा मलाई त्यही, फर्किँदा अवश्य नै भेट्नेछु भनेर भन्नुभयो । मलाई बडो आनन्द लाग्यो । म हाँस्न थालेंँ । उहाँको गाडी अगाडि हिँडिसकेको थियो । मेरो गाडी पछि हिँड्यो । दुई माइल पछि नै मैले उहाँलाई मृत पाएँ । उहाँको गाडी ठोक्किएको थियो, उहाँ समाप्त हुनुभएको थियो । मेरो ड्राइभरले भन्यो, यो त वडो अनौठो कुरो भयो । भर्खरै त तपाईंले त्यही भन्नुभएको थियो ।
यही म तपाईंहरूलाई भन्दै छु । कुनै पक्का भरोसा छैन । तपाईं घरतिर हिँड्नुस् र पुग्नु होला, कुनै पक्का भरोसा छैन । आज पुग्नुहुन्छ, भोलि पुग्न सक्नुहुन्न । भोलि पुग्नुहुन्छ, पर्सि पुग्नुहुन्न । आखिर, कहिलेसम्म जोगिनुहुन्छ ? एक दिन त आउँछ, पुग्न सक्नुहुन्न । त्यसैले, त्यसलाई टाढा पारी हेर्दा केही फरक पर्दैन । दश वर्ष पछि होस् वा बीस वर्ष पछि, त्यो दिन आउँछ । जसले बुझ्छ, ऊ त्यसलाई आजकै राती गरेर हेर्छ ।
यस्तै सोच राखेर हिँड्नुस्, भोलि बिहान उठ्न सक्दिनँ, अनि गर्नलाई के बाँकी रहन्छ ? यस्तै सोच राखेर हिँड्नुस्, भोलि बिहान हुइँदैन, अनि गर्नलाई के बाँकी रहन्छ र ? एक दिन त अवश्य नै यस्तो बिहान आउँछ, तपाईं रहनुहुन्न । यसलाई पक्का मान्नुस् । यसमा कुनै शङ्का छैन । यसलाई सम्झाउने पनि कुनै आवश्यक्ता छैन । एक दिन त पक्का त्यस्तो हुन्छ– सूर्य उदाउँछ र तपाईं रहनुहुन्न । धेरै व्यक्तिहरू धरतीमा थिए, उनीहरू अहिले छैनन् । तपाईं हुनुहुन्छ, तपाईं पनि रहनुहुन्न ।
जीवनमा मृत्युभन्दा निश्चित केही पनि छैन, तर त्यसमाथि नै सबैभन्दा कम विचार भएको छ । सबै अनिश्चित छ । र, सबै संदिग्ध छ । परमात्मा हुन वा नहुन सक्छ, आत्मा हुन वा नहुन सक्छ । यो सम्पूर्ण संसार, जुन हामी देखिरहेका छौं, हुन वा नहुन सक्छ । यो सबै सपना हुन सक्छ । तर एउटा कुरा निश्चित छ, एउटा कुरा इनडिबेटेवल छ । एउटा कुरामा कुनै सन्देह छैन, जे यहाँ छ, त्यो सदा यहाँ हुँदैन । एउटा कुरो निश्चित छ, मृत्यु छ । मृत्युभन्दा ठूलो कुनै सत्य छैन । तर हामी सबै त्यसलाई पिठ्युँ पछाडि राख्छौं र आफू मर्ने कुरो भने कहिल्यै सोच्दैनौं । र, यदि कसैले तपाईंलाई सम्झाउने हो भने तपाईं भन्नुहुन्छ, त्यस्तो अपशकुनको कुरो नबोल, त्यस्तो कुरो नगर । मर्ने कुरा किन गर्नु ?
मर्ने कुरा नै हामी टाढा राख्छौं, त्यसबाट एक हात टाढै बस्छौं । तर तपाईं जतिसुकै टाढा बस्नुस्, मृत्युको तपाईंसँग प्रेम छ, त्यो धेरै दिन टाढा रहँदैन । जीवनका सम्वन्धमा विचार गर्नेले मृत्यु सर्वाधिक निश्चित भएको पाउँछ ।
त्यसो हो भने, त्यही सर्वाधिक निश्चित तथ्यलाई नै चिन्तनको प्राथमिक तत्व किन नबनाउने ? त्यसलाई नै विचारेर जीवनको दर्शन किन नउभ्याउने ? फेरि, जीवनको फिलोसफी, जीवनको दर्शन जे–जस्तो भए पनि त्यो त्यसै मृत्युको जगमा किन नठड्याउने ? यही सुनिश्चित आधार हो र वाँकी सबै आधार त अनिश्चित छन् । यसलाई नै किन हामीले आधार नमान्ने ? र, जुन तथ्यसँग आज नभए भोलि लडाइँ लड्नै पर्छ, त्यसलाई पक्रेर किन आजै लडाइँ नलड्ने ?
जो आज त्योसँग लड्न राजी हुन्छ, जसले आज त्यसलाई चिन्तन गर्न थाल्छ, उसको सम्पूर्ण जीवनको गति र दिशा बदलिन पुग्छ । उसको जीवन कहाँबाट कहाँ पुग्छ ! जो मृत्युलाई आजै चिन्तन गर्न समर्थ छ । र, आजै चिन्तन गर्ने साहस गर्छ । आजै त्यसलाई अघिल्तिर राख्छ, पछिबाट हटाउँछ । आज त्यसलाई स्विकार गर्नेे ऊ, उसका पाइला र उसका श्वासले मृत्युको दिशातिर हिँड्न बन्द गर्नेछन् । उसका सामु फेरि एउटा नयाँ ढोका, एउटा नयाँ बाटो खुल्नेछ ।
त्यो बाटो कसरी खुल्छ, त्यसको म कुरो गरौंला ।
आजको रात म यो सानो विचार तपाईंको मनमा छिराउन चाहन्छु । त्यसलाई सोच्नुहोला । र, यस तथ्यलाई अगाडि राख्नुहोला । आज राती सुत्दा मृत्युका वारेमा विचार गरेर नै सुत्नुस् । भोलि बिहान उठेर जे काम गर्नु हुन्छ, त्यस बखत तपाईंमा बारम्बार यही सोचाइ आओस् कि म जे गर्दै छु त्यसले अन्तिम मृत्युका सामु कुनै अर्थ राख्छ ?
यसलाई छोडेर भाग्नुस् भनिरहेको छुइनँ, न त यसलाई बन्द गर्नुस् भन्दै छु । यति मात्र भनिरहेको छु कि मृत्युसमक्ष, मृत्युसामु, मृत्युको उपस्थितिमा, मेरो यो गराइले कुनै अर्थ राख्दैन भन्ने तपाइईंसामु स्पष्ट हुन सकोस् । यति स्पष्ट हुनु नै पर्याप्त हुन्छ । यसलाई छोड्न भनिरहेको छुइनँ, यसलाई छोडेर भाग्न भनिरहेको छुइनँ । यति बोध स्पष्ट हुनुपर्छ अनि तपाईंको जीवनमा एउटा नयाँ खोजको प्यास आफैं सुरु हुन थाल्छ । एउटा नयाँ प्यास तपाईं आफैं अनुभव गर्न थाल्नुहुन्छ । यो सबै यसरी नै चलिरहन्छ, यसले खासै फरक पार्दैन । तर यसको किनारै–किनार एउटा नयाँ गति पनि सुरु हुन्छ । र, विस्तारै–विस्तारै काम यही गरे पनि प्राण भने यस काममा नरहेको तपाईं पाउनुहुन्छ । अब तपाईंको शरीर मात्रै हुन्छ यसमा । तपाईंको आत्माले अर्कै कुनै दिशा अङ्गिकार गरेको हुन्छ ।
संसारमा जे छन्, जीवनमा जे छ, त्यसबाट धेरै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन केवल शरीरलाई राख्नका लागि आवश्यक हुन्छ, तर यतिमा मात्रै सबै समाप्त हुँदैनन्, अरु पनि केही छ भित्र, त्यसलाई पाउने, त्यसलाई विकसित गर्ने, केही अरु पनि आवश्यक छ । त्यसको त्याग र त्यसको विरोधमा छैन त्यो । यसबाट भागेर छैन त्यो, यहीँ उपस्थित छ । र, यदि त्यसको दिशा स्पष्ट हुने हो र त्यसको आकाङ्क्षा स्पष्ट हुने हो भने यी सबै व्यर्थ देखिने कामहरू, यी पनि त्यस वृहत्तर कार्यका सार्थक अङ्ग बन्न सक्छन् ।
यो दाल–भातको जोहो गर्नु, यो लुगा लगाउनु, यो घर बनाउनु, यो पनि सार्थक हुन सक्छ, यदि आत्मिक दिशातिर पाइला सर्ने हो भने । त्यतिखेर यी सबै त्यस आत्माका लागि अर्थपूर्ण हुन पुग्छन् र त्यतिखेर यी सबै भूमिका बन्नेछन्, आधार बन्नेछन् । शरीर आत्मासम्म पुग्ने खुड्किलो बन्नेछ । र, यी सबै कामहरू, यी सबै क्षुद्र कामहरू, यिनले आत्माको दिशातर्पm यदि मनले काम नगर्ने हो भने ती स्वयम्मा पूर्णरुपले व्यर्थ हुन्छन् । तर, प्राणले त्यस दिशातर्पm गति लिन थाल्ने हो भने, ती सबै कामहरू सार्थक हुन पुग्छन् ।
महावीर पनि खाना खान्छन् र सास फेर्छन् । कृष्ण पनि पानी पिउँछन् र क्राइष्ट पनि लुगा लगाउँछन्, तर धेरै फरक छ । धेरै–धरै फरक छ । हामी लुगा मात्र लगाउँछौं तर कुरो अघि बढ्दैन । हामी केवल शरीरलाई मात्रै बनाउँदै जान्छौं तर किन र केका लागि ? हामी खाना खाई रहन्छौं तर शरीरलाई जोगाउनुको उपयोगिता के हो ? हामी केवल साधनलाई मात्र जोगाउँछौं र समाप्त भएर जान्छौं, किनकि जीवनमा कुनै साध्य छैन । यदि साध्य हुने हो भने जीवन सार्थक हुन सक्छ । साधन स्वयम्मा व्यर्थ हुन्छ, त्यसको कुनै सार्थकता हँुदैन ।
एउटा मान्छे बाटो बनाउँछ । एउटा त्यस्तो मान्छे जसलाई कतै पुग्नुछैन र उसले जीवनभरि बाटो बनाओस्, बाटो सम्याओस्, जङ्गल फडानी गरोस्, रोडा ओछ्याओस्, बाटो बनाओस् । र, तपाईं उसलाई सोध्नोस्, यो बाटो किन बनाएको ? र, उसको जवाफ होस्, मैले कतै पुग्नुछैन । त, बाटो बनाउनु व्यर्थ भएर गयो । हामी सबै यस्तै बाटो बनाउँछौं, जसलाई कतै पुग्नुछैन ।
जसलाई परमात्मासम्म पुग्नुछैन, उसको जीवन एउटा त्यस्तै बाटो हो, जसलाई ऊ बनाइरहेको हुन्छ, तर पुग्नु भने कतै हुँदैन ।
जसको प्राण परमात्मासम्म, अमरत्वसम्म पुग्ने आकाङ्क्षी हुन्छ, उसका ती सम्पूर्ण क्षुद्र जीवन, ती स–साना रोडा ओछ्याउनु र माटो राख्नु, जङ्गल फडानी गर्नु र बाटो बनाउनु सार्थक हुन पुग्छन् । बाटो हामी सबै बनाउँछौं तर पुग्ने हामीमध्ये थोरै मात्र हुन्छन् । किनकि बाटो बनाउँदा, हामीमा पुग्ने विचार नै हुँदैन । मैले बाँच्ने व्यवस्था गर्दै जानुभन्दा त्यो असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ कि म सोधूँ, म किन बाँच्न चाहन्छु ? मैले केवल हुनुको रक्षा गरिरहनुभन्दा यो धेरै उचित हुन्छ कि म सोधूँ, म किन हुन चाहन्छु ?
यी विचार, यी प्रश्न तपाईंको मनमा जन्मिनु पर्यो । हाम्रा मनमा असाध्यै थोरै प्रश्नहरू जन्मिन्छन् । प्रश्नहरू जन्मिँदै जन्मिँदैनन् । र, प्रश्न नै नजन्मिने हो भने, जिज्ञासा नै नजन्मिने हो भने खोज कसरी जन्मिन्छ ? र, खोजको आकाङ्क्षा नै नहुने हो भने त्यस दिशामा श्रम कसरी हुन्छ ? त, यी सबै कुरा तीन दिनमा विस्तारै–विस्तारै तपाईंहरूलाई भनूँला ।
आजको रात म यति मात्र भन्छु, मृत्युलाई साथै राखेर सुत्नुस् । त्यो तपाईंसँगै सुतेको छ भन्ने विचार गर्दै सुत्नुस् । र, निरन्तर त्यसलाई सामुन्ने राख्नुस्, साथमा राख्नुस् । त्यो सँगै छ, त्यसलाई सँगै राख्नुस् । जसले मृत्युलाई साथै राख्छ, मृत्युलाई सँगी बनाउँछ, स्मरण राख्छ, परमात्मा उसको साथमा हुन्छ । उसले पहिलो पाइला उठाइसकेको हुन्छ, त्यो धेरै टाढा हुँदैन ।
मृत्युसँग जसले मित्रता गर्छ र त्यसलाई साथमा लिन्छ, उसले पहिलो पाइला उठाइसकेको हुन्छ । अमरत्व उसको साथमा हुन्छ । आज नभए भोलि, ढिलो–चाँडो, परमात्मा उसको नजिक हुन्छ ।
मृत्यु सँगै हुनुमै सबै कुरा लुकेका छन् । म त्यसलाई सार्थक भन्छु, जसले मृत्युलाई साथमा राखेको हुन्छ । म त्यसलाई संसारी भन्छु, जो मृत्युसँग भाग्दै हुन्छ, लुक्दै हुन्छ । र, त्यसलाई साथमा राखिरहेको हुँदैन ।
र, धेरै भन्दिनँ । शिविरको चर्चा त भोलि बिहानदेखि सुरु गरुँला । यो त भूमिकाको लागि । तपाईंको मनमा साधनाको कुनै जन्म हुन सक्छ भने त्यो त्यतिखेर मात्र हुन सक्छ, जतिखेर साधक हुने यो पहिलो सर्तलाई तपाईं पूरा गर्नुहुन्छ ।
मृत्युबाट तपाईं मुख नफर्काउनुस् । त्यसको आँखामा हेर्नुस्, त्यसलाई नजिकै राख्नुस् । आज त्यो सँगै सुत्नुस् । त्यसलाई नै विचार गर्दै, आफ्नो मृत्युलाई विचार गर्दै, त्यसलाई नजिकैको मान्दै । त्यो कुनै पनि बखत हुन सक्छ, कुनै पनि क्षण । भोलि बिहानै तपाईंका मनमा केही थप प्रश्नहरू जन्मिनेछन् । त्यस्तो भयो भने, म यहाँ तीन दिनसम्म रहन्छु, ती प्रश्नहरू मलाई सोध्नुहोला, त्यसको चर्चा गर्नुहोला । यदि जन्मिँदैनन् भने, मृत्युलाई नजिकै राख्ने कुनै विचार आउँदैन भने भोलि बिहान यहाँ नआउनुहोला । त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । तपाईंलाई आफ्नो मृत्युको कुनै विचार आउँदैन भने, भोलि बिहान यहाँ नआउनुहोला । त्यसको कुनै सार्थकता रहँदैन, किनकि म जे जति भन्न सक्छु, त्यो त्यसपछि मात्रै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
जतिखेर तपाईंलाई आफ्नो मृत्युको दर्शन हुन थाल्छ र तपाईंको मनमा यो चिन्ता, यो विचार आउन थाल्छ, म के गरुँ ? चारैतिरबाट मृत्युले घेरेको छ, म के गरुँ ? म कसरी माथि उठूँ ? चारैतिर सबै नष्ट हुने भएको छ, म केही अविनश्वरलाई पाउने कुन बाटो खोजूँ ? अनि मात्र तपाईं आएको अर्थपूर्ण हुन्छ । म केही भन्छु, त्यो अनि मात्र सार्थक हुन्छ । किनकि म त्यही सेतु बनाउने कुरा गर्छु, जसले मृत्युबाट अमृतसम्म पुर्याउँछ ।
मेरा यी कुरालाई यति प्रेम र शान्तिले सुन्नुभयो, त्यसका लागि धरै–धेरै अनुगृहीत छु । परमात्माले तपाईंलाई मृत्युको नजिकको बोध दिऊन्, यही प्रार्थना गर्दछु ।
मूल लेखक - ओशो
भावानुवाद - नन्दलाल आचार्य
पर्खी बसेँ लहर जीवनमा
आज पनि उही पुरानै तारिक
गाजा र विस्फोटनका धुवाँहरु
धन्य प्रभु तिमी
विवशता आफ्नै धरातलसँग